के हो यमपञ्चक ? यसको पाँच दिन - Recent Nepal News
के हो यमपञ्चक ? यसको पाँच दिन
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ३१, २०७४ समय: १६:२४:५५
नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार दशैंको पन्ध्र दिनपछि आउने सबैभन्दा ठूला पर्वहरु मध्ये एउटा चाड हो । यो चाड कार्त्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिन काग तिहारको नामले शुरु भएर कार्त्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथिको भाइटीकासम्म पाँच दिन मनाइन्छ। हिन्दू धर्मावलम्वीले दीपावलीको रुपमा यस पर्वलाई धूमधाम सित मनाउँछन् । यस पर्वको नाम हिन्दी शव्दको त्योहार शव्दबाट विकृत हुँदै तिहार बनेको अनुमान लगाइन्छ।